Willian Oo Raacaya Wadada Luiz Ee Ka Tagitaanka Waqooyiga London – Garsoore Sports
Willian Oo Raacaya…
Ciyaaryahanka garabka uga ciyaara kooxda Arsenal ee Willian ayaa la filayaa inuu raaco wadada saaxiibkii David Luiz oo hoggaanka u haya xerta ka baxaysa albaabka Emirates Stadium xagaagan, inkastoo weli labo sano ay uga harsan tahay qandaraaskiisa.
Willian ayaa si xor ah kaga soo biiray Chelsea xagaagii lasoo dhaafay, isagoo qalinka ku duugay heshiis seddex sano ah laakiin qaab-cayaareed u sahlay hal gool iyo todobo caawin 37 kulan oo uu saftay ayaa ka dhigtay taageerayaasha inay wax intaas ka badan ay rabaan.
Willian ayaa bilaabay xilli ciyaareedkiisii bilowga ahaa, xiddiga reer Brazil ayaa si deg-deg ah u lumiyay booskiisa kooxda waxana haatan si joogto ah loo arkaa isaga oo ka soo kacaya keydka maadaama uu lasoo baxay qaab-cayaareed aad u liidata.
Waa xaalad u muuqata mid aan u shaqeyneynin qofna, laakiin nasiib wanaag, waxaa laga yaabaa inay soo dhammaato xagaagan iyadoo wariyaha arrimaha suuqa ku xeeldheere ee Fabrizio Romano uu sheegay in 32 jirkaan la rajeynayo inuu raadsado kooxdiisa xiga marka uu furmo suuqa kala iibsiga.
Kooxo ka kala socda Yurub iyo Major League Soccer-ka dalka Mareykanka ayaa ka hadlay xiisaha ay u qabaan Willian, haatana Arsenal ayaa sugeysa dalab rasmi ah oo xiddigan laga soo gudbiyo.
Arsenal Oo Lagu Heysto Farriintii Taageeradda Falastiin Ee Mohamed Elneny